Tani waa sida Apple ay ugu guuleysatay inay baabi'iso baakadaha caagga ah ee iPhone 13 | Wararka IPhone
Tani waa sida Apple ay ugu guuleysatay inay baabi'iso baakadaha caagga ah ee iPhone 13
Laga soo bilaabo 2018 Apple wuxuu ahaa shirkad kaarboon dhexdhexaad ah heer hawlgal caalami ah. Si kastaba ha ahaatee, yoolku waa in xitaa soo -saarka alaabtoodu ay noqon doonto dhexdhexaad kaarboon ka hor 2030. Taasi waa sababta shaqo weyn loo qabtay sidoo kale in la isku dayo in la hubiyo in badeecadu saamaynta ugu yar ee suurtogalka ah ku yeelato bay'ada iyadoo kor loo qaadayo cusboonaysiinta iyo dib -u -warshadaynta agabka. In mawduuca ugu dambeeya waxay ku dhawaaqeen taas iPhone 13 iyo iPhone 13 Pro ma lahaan jireen baakad caag ah oo badbaadin lahayd 600 tan oo caag ah. Si kastaba ha ahaatee, shakigii laga qabay waxa ay ahaan lahayd baakada cusub iyo sida aan u hubin lahayn in aan la furin ayaa hore loo xaliyay. Kani waa baakadaha cusub ee iPhone 13.
Isteerarkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad ka saarto baakadaha caagga ah ee iPhone 13
Dukaamadeenna, xafiisyadayada iyo xarumaha xogta iyo hawlgaladaduba waa kaarboon dhexdhexaad ah. Sannadka 2030 -ka ayaa sidoo kale alaabteenna iyo raad -raacaaga kaarboonka la isticmaali doonaa marka la isticmaalayo. Sannadkan waxaan ka saarnay baakadii caagga ahayd ee iPhone 13 iyo iPhone 13 Pro, waxaan badbaadinnay 600 tan oo caag ah. Waxaa intaa dheer, dhirtayada shirka ee kama dambaysta ahi waxba uma diraan qashin -qubka.
Furaha ku dhawaaqista Tim Cook iyo kooxdiisaba qodobka muhiimka ah ee Sebtember 14 ayaa sidoo kale ku jiray wararka la xiriira deegaanka. Waa inaan tixgelinaa hadafka Apple taas marka la gaaro 2030 labada hawlgal ee caalamiga ah iyo abuurista badeecaddu waa dhexdhexaad kaarboon. Si taas loo sameeyo, lacag aad u badan waa in la geliyaa fududeynta dib -u -warshadaynta badeecadaha iyo adeegsiga agabyada la cusboonaysiin karo ee aaladaha cusub.
Marka laga hadlayo iPhone 13, the saarista baakadaha caagga ah ee daboolaya sanduuqa. Baakadan waxay lahayd ujeedo laba laab ah. Marka hore, dhawr sanduuqa. Marka labaad, si loo hubiyo in alaabta aan la furin ka hor intaan la gaarin gacmaha isticmaalaha. Oo sidee baad u maareyn doontaa inaad samayso baakad sii wadata sii wadidda qodobkan ugu dambeeya adiga oo aan isticmaalin caag aad u badan?
Sanduuqa iPhone 13 pic.twitter.com/NJfP37hFFP
Xalka waxaa laga helaa sawir ka muuqday Twitter -ka halkaas oo aad ka arki karto baakadka iPhone 13. Si loo hubiyo in sheyga aan la furin koolo-ilaa-hoose ayaa loogu talagalay xagga hoose ee sanduuqa, oo maraya labada xuduud ee furitaanka ugu gaaban. Sidan, sanduuqa ayaa weli ku xiran koollo taas waxaa laga saari karaa iyada oo loo marayo sibidh fudud iyadoo la qabanayo tabka oo ku calaamadsan falaar cad oo ku taal cagaar cagaaran.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Tani waa sida Apple ay ugu guuleysatay inay baabi'iso baakadaha caagga ah ee iPhone 13
Hadda waad kaydin kartaa iPhone 13